VSO Image Resizer v3.0.1.55 (latest version)
ဒါကတော့ မူရင်းပုံကို အရွယ်အစားတူ၊ ဆိုက်တူ၊ အရွယ်အစားကို scale ကိုက် အတိအကျ ပြန်သေးချင်သူများ အတွက် တစ်ကယ့်ကို အရေးပါပါတယ် . ကျွန်တော် ဒါလေးကို အသုံးပြုပြီးတော့ လုပ်ထားတဲ့ နမူနာကို ဒီမှာ ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ် . မိမိတင် မည့် ဓါတ်ပုံရဲ့ အရွယ်အစားဟာ တူညီနေမှ အဲ့လိုမျိုးလေး လှလှပပနဲ့ ညီနေမှာပါ . ကျွန်တော် အဲ့ဒီ့ ၀ဘ်ဆိုက်လေးကို adobe photoshop + adobe fireworks + adobe dreamweaver သုံးခုပေါင်းပြီးတော့ လုပ်ထားတာပါ .
Posted by တောင်တမန်နယ်စား at 5:24 AM